Ngezinye izikhathi kufanele ubhekane nezinkinga, ngenxa yesisombululo ongazi ukuthi ubani ozoya kuso. Kubonakala sengathi akukho lutho odokotela, kodwa alusebenzi ngokuzimela. Emibuthanweni enjalo kungenzeka ukuveza inkinga, ngokusobala, futhi engadingekile - ibhotela elimnyama. Yini okufanele uyenze ngayo? Futhi akuyona yini isibonakaliso sento engathí sina kunephutha eliyisimonyo?
Isizathu sokuqala: isikhumba se-thyroid
Okokuqala udinga ngempela ukunakekela isici sezokwelapha. Ngenxa yokuthi izifo ezithile, ikakhulukazi, igulane le-thyroid, kungaba khona ngempela uphawu olufana nesigqoko esimnyama. Okufanele ukwenze kulokhu, kucacile: ukwelashwa. Ngokuqedwa kwesizathu kuzodlula kanye nemiphumela, kufaka phakathi ukubukeka kwezingqimba.
Isizathu sesibili: i-beriberi
Uma ukusola kwezokwelapha mayelana ne-thyroid akuqinisekisiwe, kungacatshangwa ukuthi umzimba wakho ubhekene nokutholakala kwamavithamini. Ukungabi namavithamini, ikakhulukazi, A no-E, futhi kuholela ekubukeni kwesigqoko esimnyama. Okumele ukwenze kulesi simo, futhi, akunzima ukuqagela. Ngemuva kokuthatha inkambo yama-multivitamini adingekayo, izingxube zakho zizobuyela esimweni esijwayelekile futhi zimise ukwesabisa wena nabanye ngokubonakala kwakho.
Isizathu esithathu: hyperkeratosis
Isizathu sesithathu sezokwelapha singase sibe hyperkeratosis - ukuqina kwesikhumba kulezo zindawo ezithola ukungqubuzana kwangasese nokuqhubekayo noma ukucindezelwa. I-Hyperkeratosis iholela ekubukeni kwesigqoko esimnyama. Yini engingayenza ukuze ngisuse lesi sifo? Amabhati! Ihamba kahle emanzini ashisayo (cishe ingxenye yesigamu sehora), bese isomisiwe (kodwa ize ingabe idle ngokuphelele) futhi ucezu lubekwe esikhumbeni. It is fixed first nge polyethylene noma iphepha lesikhumba, bese kukhona okuthile efudumele. Ngemuva kwemizuzu engu-15 yonke into isusiwe, ama-elbows ahlanjululwa ngamanzi apholile futhi agcwele ukhilimu. Ngemuva kwezinqubo eziningana ezinjalo, izimbambo ziyoba njengomntwana!
Kodwa uma kungenayo izinkinga zempilo, futhi ama-elbows namanje awayithokozi kahle, ngakho-ke kuyadingeka ukuba unakekele. Futhi umshwalense we-hyperkeratosis ufanelekile ngempela ukuqala, ngoba futhi uyakwazi ukugcoba ama-black elbows (kungakhathaliseki ukuthi ugula).
Ezimweni eziningi (uma kungenjalo konke), umbala okhanyekayo wezindophi uhambisana nokomiswa kwesikhumba. Kumele kutholwe, okwenziwe i-napkin, ifakwe ngamafutha afudumele yemifino (okukhethwa kukho kunikwa umnqumo, kodwa kungenzeka futhi ubhekiswe ku-sunflower) futhi kufakwe endaweni efanele. I-Cellophane ifilimu, ukuxubha - futhi cishe amahora amabili asele yedwa.
Kuhle ukubhekana nezandla ezimbi nama-masks. Ikakhulukazi - kusuka kumazambane abilisiwe, afudumele afudumele namafutha omnqumo ofanayo noju. Iphakanyiswa ngokufana neseluleko esandulele, futhi ngemva kokususwa kwezingqimba kuyadingeka ukuba uhlaziye - izicucu zesikhumba ezingaphandle zizophela. I-cream emva kwe-mask iyimpoqo! Yiqiniso, kuzodingeka ukuba udibanise, kodwa ama-black elbows azoshabalala ngokuqinisekile.
Indlela yokuphatha ngayo, ugogo nobaba bebazi. Baphinde babe nendlela yokusebenzisa ubisi oluboshwe (kungashintshwa ngejubishi ijusi noma amasondo). Kusukela kusetshenziselwa uketshezi oluketshezi lokushisa komzimba, hlanza amaminithi angu-20, emva kwalokho amafutha enhlanzi kufanele agxilwe emaceleni. Isikhumba sithenda futhi sithandeka.
Ngokuvamile, into esemqoka yukuthi impilo ijwayelekile, futhi ngezingubo ezimnyama ngeke kube nzima ukubhekana nazo.
Kungani kukhona umsindo ekhanda nasezindlebeni?
Dorofeeva Tatiana: Biography, empilweni yakho futhi umsebenzi ku-TV